Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM na TWM: WM ndị ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Taa, anyị ga n'ihu nke asatọ banyere Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha ihe ndị a 5, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
“Ihe njikwa Window na ihe mebere iji banye na ndabara (steamos-session) na Distro GNU / Linux SteamOS, nke n’aka nke ya, mepụtara maka Steam Machines / Steamboxes.".
Wepụta mmekọrịta na-aga nke ọma na ihe nkesa X, yana interface ọrụ Steam.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka Window Manager na Onye na-ede ihe n'otu oge mgbe egwuregwu ahụ na-agba ọsọ, ebe oge fọdụrụ na mmekọrịta ya na "gnome-session" na "gnome3" iji kwado ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Ebumnuche ya ịrụ ọrụ dị ka o kwere mee, idebe ngwa Steam, yana ndọtị, egwuregwu ahụ n'onwe ya, juputara n'ihu na etiti.
Ya nwụnye na ojiji nwere ike na-eme na SteamOS n'ime Sotu igwe / Steamboxes, nke n'ikpeazụ enweghị ndụ azụmaahịa na-aga nke ọma. Agbanyeghị, iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere SteamOS ị nwere ike pịa ihe ndị a njikọ.
"Ma ọ bụn X11 window manager nke ụdị Tiling, jikwaa keyboard na e dere kpamkpam na Common Lisp mmemme asụsụ".
IGbalịa ịbụ ịhaziri ahazi mana nke pere mpe. Ya mere, o nweghi ihe icho mma na windo, ma o nwere otutu nko iji dozie nhazi onwe gi, na ihe ndi ozo iji dozie ihe ichoro.
Ọ dabere kpamkpam na keyboard maka ntinye data. Ọzọkwa, ọ nweghị bọtịnụ, akara ngosi, ogwe aha, ogwe ngwaọrụ, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime wijetị GUI ndị ọzọ.
Nhazi ya nke Lisp gosipụtara ngosipụta na-eto eto nke WM dị ka ihe na-arụpụta ihe na nke nwere ike ịhazi.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwungwu "stumpwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ nke ọzọ njikọ.
“Onye njikwa windo nke bụ akụkụ (akụrụngwa) nke Desktop Environment nke otu aha ahụ, mepụtara n’otu mbọ zuru ụwa ọnụ iji nye ụmụaka niile otu ohere ịnata agụmakwụkwọ dị mma. Ọzọkwa, ọ dị n'ihe karịrị asụsụ iri abụọ na ise, yana ndị ejiri ihe karịrị mba iri anọ na-eji ọrụ ha eme ihe kwa ụbọchị n'ụlọ akwụkwọ.".
Dị ka akụkụ dị mkpa nke ọrụ ahụ ihe omumu ihe omumu nke nabatara uzo eji komputa eme ihe maka mmuta, na akwalite ma na-agba ume mmekorita, ntughari uche na nchoputa n'uzo zuru oke na ntaneti ndi oru.
Ọ na - akwalite 'echiche ọmụmụ' na 'omume gosipụtara', n'ihi nghọta doro anya nke imewe (eserese / anya) enyere ụmụaka na ndị nkuzi, na-enye ha ohere ịzigharị, weghachite ma tinyeghachi sọftụwia ahụ. dịka ọdịnaya dị na mmemme mmụta siri ike.
Usoro Sugar maka ịkekọrịta, nkatọ na nyocha dabere na ọdịbendị nke sọftụwia n'efu (FLOSS).
A na-elekarị ya anya karịa DE karịa WM, ebe ọ bụ na a na-ahụkarị eserese eserese ya dị ka ihe dị iche maka echiche "Desktọpụ" na kọmpụta, n'ihi na a na-ahụta ya dị ka nnwale mbụ siri ike iji mepụta njirimara onye ọrụ. ihe omuma na ndi mmadu: ndi muta agha aghaghi itinye aka na nyocha na mmekorita.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "eke-sugar", "eke-sugar3" na "sucrose"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM a na njikọ ndị a: 1 njikọ, 2 njikọ y 3 njikọ.
"Ma ọ bụn Window Manager na-arụ ọrụ dị ka ezigbo onye na-edekọ ihe na Tiling maka Wayland na ezigbo ngbanwe maka i3 Window Manager maka X11. Na-arụ ọrụ na ntọala i3 dị ma na-akwado ọtụtụ atụmatụ i3, gbakwunyere ụfọdụ mgbakwunye".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ gbasara obere ihe karịa 1 ọnwa gara aga, ọ bụ ezie na nsụgharị ikpeazụ ya nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 2.
Na-enye gị ohere ịhazi windo ngwa ngwa n'ụzọ ezi uche dị na ya, kama ị na-enwe ohere. A na-ahazi windo ndị a na ndabara nke na-eme ka arụmọrụ nke arụmọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ike iji ngwa ngwa megharịa ya.
Ọ na-eji "wlroots" iji nye a modular isi ya, n'ụzọ iji kwado mmepe ya, ngbanwe ya na nhazi ya.
Ọ naghị akwado ndị ọkwọ ụgbọ ala proprietary, nke gụnyere ọkwọ ụgbọ ala Nvidia. Achọrọ onye na-emeghe oghere ọhụụ Nouveau.
"Onye njikwa windo dị mfe ma rụọ ọrụ maka sistemụ windo X".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ gbasara obere ihe karịrị ọnwa abụọ gara aga.
Ọ na-enye ogwe aha, windo ndị nwere ụdị, ụdị dị iche iche nke njikwa akara ngosi, ọrụ ndị ọrụ kọwaa onye ọrụ, ntinye aka na-pointer keyboard, na igodo akọwapụtara onye ọrụ na njigide bọtịnụ.
Ọ bụ obere mmemme, nke ejiri Xlib wuru, nke na-eme ka ọ dị mfe n ’usoro usoro ihe ọchọrọ ọ chọrọ. Ma ọ bụ ezie na ọ dị mfe, ọ bụ ukwuu configurable; Akara edemede, agba, obosara ókè, bọtịnụ mmanya aha, na ihe ndị ọzọ, onye ọrụ niile nwere ike ịhazi ya.
Igwe okwu ya dị iche na WMs na DEs a maara nke ọma, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ yiri nke MacOS ma ọ bụ Windows, yabụ ndị ọrụ ọhụụ nwere ike isiri ya ike iji ya na-agụghị akwụkwọ ha na / ma ọ bụ jiri ya ogologo oge.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "twm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ nke ọzọ njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM na TWM, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM na TWM: WM ndị ọzọ maka Linux
Mastercard kwalitere ikpo okwu nyocha usoro ihe eji egbochi ego nke Central bank